नेपाली फिल्म क्षेत्रमा काण्डै काण्ड ! | YesKhabar
२०७७ साल असार २९ गते, सोमबार ०२:१४ PM
काठमाडौं – लकडाउनका बेला फिल्म क्षेत्र कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर फिल्मकर्मी तथा कलाकारबीच बहस हुनेछ भन्नेमा धेरैले अनुमान गरेका थिए ।
नेपाली फिल्म राम्रा हुँदैनन् भनेर दर्शक तथा समीक्षकले भन्दै आएका छन् । मेकरले फिल्म कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिने र कलाकारले आफ्नो अभिनयमा सुधार गर्नेछन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो ।
किनकि, लकडाउनका बेला दर्शकले झनै धेरै फिल्म हेरेका छन् । नेपाली मात्र होइन, दर्शकले विश्वभरका फिल्महरु हेरिरहेका छन् ।
अब नेपाली फिल्ममेकरलाई पनि थप स्तरीय फिल्म बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । त्यसैले धेरैलाई लागेको थियो, यो लकडाउनका बेला फिल्ममाथि व्यापक बहस हुनेछ ।
तर, नेपाली सेलिब्रेटी भने फिल्मको सिर्जनात्मक बहसभन्दा वाहियात फण्डाका कारण चर्चामा आएका छन् । लकडाउनका बेला केही कलाकारलाई फण्डाले नै चर्चामा ल्याइदियो । त्यस्ता के फण्डा मच्चिए त ?
पूजा शर्माले भनिन् – ७२ प्रदेश १४ जिल्ला
कलाकार पूजा शर्माले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालमा ७२ प्रदेश र १४ जिल्ला भएको बताइन् । यो अभिव्यक्तिका कारण लामो समय उनी ट्रोलको शिकार बनिन् ।
नेपालमा कति जिल्ला छन् भन्ने समेत थाहा नभएको भन्दै कतिपयले नेपाली कलाकारको जिम्मेवारीप्रति नै प्रश्न उठाए । नेपालमा कति प्रदेश छन् भन्ने पनि थाहा नपाएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो ।
निर्देशक सुदर्शन थापा र एकाध फिल्मकर्मीबाहेक उनको पक्षमा अरु कोही बोलेनन् । पूजाले पनि उक्त अभिव्यक्ति भाइरल भए पनि केही प्रतिक्रिया जनाइनन् ।
दीपाश्री निरौलाको महानायक प्रकरण
कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा राजेश हमाललाई पत्रकार र प्राविधिक संघले महानायक बनाइदिएको टिप्पणी गरेपछि उनी विवादमा तानिइन् ।
‘महानायक’ काण्डले यति उग्र रुप लियो कि, दीपाश्री निरौलालाई यो अन्तर्वार्ताले ठूलो तनाव बेहोर्नुपर्‍यो । निरौलालाई महानायिका भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य समेत गरियो । कतिपयले उनलाई तल्लो स्तरसम्म झरेर तुच्छ गालीसमेत गरे ।
यही विषयमा टिप्पणी गर्दै अभिनेता दीपकराज गिरीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखे । उनले अन्तर्वार्ता दिँदा कलाकारले ख्याल गर्नुपर्ने र होसियार हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए । तर, दीपकले आफ्नो ग्याङ सदस्य दीपाश्री निरौलाको समर्थन गरेको भन्दै हमालका फ्यानले दीपकराज गिरीलाई पनि गाली गरे ।
कतिले त हमाललाई महानायक नभनेको भन्दै दीपकराज गिरीलाई व्यङ्ग्य गर्दै महानायक बनाए । अहिले उनले पनि यसको स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ । हालै उनले आफ्नो ब्राण्डमाथि ‘साइबर बुलिङ’ भइरहेको बताएका थिए ।
भुवन केसी र साम्राज्ञी शाहको आरोप प्रत्यारोप
यो लकडाउनका बेला सबैभन्दा चर्चित बनेको अर्को विषय हो, भुवन केसी र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहबीचको दुष्मनी ।
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू भुवन केसीबाट ‘घिनलाग्दो व्यवहार’ को शिकार भएको बताएपछि यो विषय चर्चामा छ । यी दुईको ‘सामाजिक सञ्जाल वार’ यति अगाडि बढ्यो कि, भुवन र साम्राज्ञीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ठूलै बहस भयो ।
भुवनले पनि साम्राज्ञीले चरित्रहत्या गरेको र आफूले दुर्व्यवहार नगरेको दोहोराइरहे । साम्राज्ञीले पनि भुवनमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहिन् ।
पछिल्लो समय भने साम्राज्ञी चुप छिन् । उनले महिलाको शक्ति सम्झाउँदै भुवनलाई चेतावनी दिएकी छिन् । यता भुवन भने मिडियामा आएर आफूले दुर्व्यवहार नगरेको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् ।
सन्दीप क्षेत्रीले मधेशी समुदायलाई चोट पुर्‍याएको आरोप
हास्यकलाकार सन्दीप क्षेत्रीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ‘ह्वाट द फ्लप’ पनि विवादमा आयो । कार्यक्रमको एक एपिसोड युट्युबबाट समेत हटाइयो ।
यो लकडाउनका बेला सन्दीप पनि विवादमा तानिए । त्यसो त अनुहारमा कालो पोतो लगाएर मधेशी समुदायको अपमान गरेको आरोप उनीमाथि लागिरहन्थ्यो ।
यसपटक भने सन्दीपविरुद्ध उजुरी नै परेको छ । वीरगञ्जका एक व्यवसायीले सन्दीपविरुद्ध महानगरीय प्रहरी कार्यालय टेकुमा हुलाकमार्फत उजुरी पठाए ।